कोरोना संक्रमण र कोभिड–१९ बिच फरक ? - हेटौंडा टुडे
कोरोना संक्रमण र कोभिड–१९ बिच फरक ?
२१ आश्विन २०७७, बुधबार १२:३५
काठमाडौं \_ नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९० हजार ८ सय १४ जना पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या २२ हजार ७ सय ९ पुगेको छ । संक्रमण निको हुनेको संख्या भने ६७ हजार ५ सय ४२ पुगेको छ । सरकारले संक्रमित र रोगीको संख्या छुटाएको पाइँदैन । केही संक्रमितले कोरोना पोजेटिभमात्रै भएको हो, कोभिड–१९ भएको होइन भन्दै सामान्य तरिकाले लिएको पनि पाइन्छ । कोरोना पोजेटिभ भनेको के हो ? संक्रमणमात्रै हुँदा के हुन्छ ? कोभिड–१९ भनेको के हो कोभिड–१९ हुँदा के हुन्छ भन्नेबारे मानिसहरूमा अझै अन्योल छ।
सार्स–कोभ–२ भनेर वैज्ञानिक नाम छ । मानिसहरूले त्यसलाई कोरोनाभाइरस भन्ने गरेका छन वास्तवमा त्यो देखापर्नु भनेको भाइरसको संक्रमणमात्रै हो । तर जब त्यो भाइरसले शरीरभित्र असर गरेर लक्षणहरु देखापर्न थाल्छन्। तब त्यसलाई कोभिड–१९ भन्ने गरिन्छ । यी दुई छुट्टाछुट्टै अवस्था हुन त्यसैले वैज्ञानिक तरिकाले बुझ्ने हो भने कुनै मानिसलाई कोभिड–१९ भएछ भनियो भने उहाँ बिरामी हुनुभएको रहेछ भनेर बुझ्ने हो । कोरोना पोजेटिभ देखिएको र १४ दिनसम्म केही लक्षण देखिएको छैन भने कोभिड–१९ भनिदैन । संक्रमणमात्रै हुँदा शरीरमा के हुन्छ भनेर आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । कतैकतै संक्रमण निको भइसकेपछि छातीमा दाग भएका कुरा आएका छन यद्यपि यसको पुष्टि भएको छैन । साधारणतया जसलाई संक्रमणमात्रै भएको छ, उनीहरूलाई खासै समस्या आएको देखिएको छैन तर सबैमा यो लागु नहुन पनि सक्छ ।
अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणमात्रै भएकालाई कुनै समस्या देखिएको छैन । कोरोना भाइरस एकदम सक्रय भएकाले अहिले संक्रमणमात्रै हुँदा स्वास्थ्यमा समस्या छैन भनेर ढुक्क हुनु हुँदैन, पछि देखिन पनि सक्छ । त्यसैले हामीले हरेक कुरा आजको मितिसम्म के छ भनेर हेर्नुपर्छ ।सुरुवाती अवस्थामा लक्षणविहीन संक्रमितले तातो पानी, बेसारपानी खाएर, योगा गरेर संक्रमण निको भैहाल्छ भन्ने थियो। यसैबीच, कोरोना नै छैन, हो–हल्लामात्रै गरिएको हो भन्नेहरू पनि आए । त्यसैले मानिसहरूमा अझै पनि अन्योल देखिएको आभाष हुन्छ । नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या ५ सय ६३ पुगेको छ । सामान्य लक्षण भएर निको भएका, संक्रमणमात्रै भएर निको भएका, संक्रमण भएर आइसियूबाट निस्किएका, निको भएकाहरूको आ–आफ्नै भोगाइ बुझाइ छ । त्यसैले कोरोना संक्रमण बुझाइको बारेमा ठुलो विभाजन पनि आएको छ । हामीले हेलचक्य्राइँ गर्न भएन । संक्रमणलाई कसरी लिने भन्ने कुराचाहिँ कसले कसरी भोगे, त्यसरी नै बुझे ।
कोरोना लाग्ने बित्तिकै मरिहाल्ने होइन भन्दै हामीले बेवास्ता गरेको खण्डमा झन् ठुलो समस्या आउन सक्छ । अहिले हामी सबैको जिम्मेवारी भनेको कोरोना संक्रमण फैलन नदिने हो ।कोरोना पोजेटिभ हुँदा आफूलाई केही नभए पनि मबाट घरपरिवार, समुदायमा रहेका दीर्घरोगी, प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मानिसलाई सर्न सक्छ कि भनेर सावधानी अपनाउन जरुरी छ । अर्को कुरा, युवालाई पनि कोरोना संक्रमण भएर स्वास्थ्य समस्या देखिएका तथा मृत्युसम्म भएका उदाहरण भएकाले बेवास्ता नगरी सतर्क रहनु पर्छ ।
केही मानिसलाई कोरोना पोजेटिभ भएर समयमै निको होला । लक्षणविहीन संक्रमितले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड ख्याल नगर्दा दीर्घरोगी, रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मानिसमा संक्रमण हुन सक्छ । उनीहरुलाई कोभिड–१९ को लक्षण देखिएर समस्या सिर्जना हुने हुुँदा संक्रमित र रोग लागेका दुवैथरीले ख्याल गर्न जरुरी छ ।
कोरोना संक्रमण भएपछि लक्षणहरू देखिन पनि सक्छ र नदेखिन पछि सक्छ । कोभिड–१९ हुँदा पनि लक्षण आउन पनि सक्छ र नआउन पनि सक्छ । संक्रमितमा लक्षण नदेखिए पनि अरुलाई सर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत संक्रमितमा सामान्यखालको ज्वरो आउने, हल्का शरीर दुख्ने, रुघाखोकी लाग्ने, कसै कसैलाई थुक निल्न गाह्रो हुने, गन्ध थाहा नपाउने पनि हुन सक्छ । बाँकी २० प्रतिशतमा निमोनियाको लक्षणदेखि लिएर सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने, खोक्दा वा लामो सास फेर्दा छाती भारी हुन सक्छ । कोभिड–१९ भएर अझै गाह्रो भयो भने बिरामीलाई अक्सिजन चाहिने अवस्था आउन सक्छ । त्यो भनेको हातखुट्टा, ओठ निलो हुनुका साथै चक्कर लाग्ने हुन्छ ।कोभिड– १९ को लक्षण देखिँदा मानिसहरू रुघाखोकी भनेर बस्ने पनि हुन्छन् । यो मौसमी फ्लूको समय पनि हो । दुईवटै उस्तैउस्तै देखिँदा के भएको भन्ने थाहा नपाएर धेरैजसो मानिसले फरक छुट्याउन सक्दैनन् । प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, दीर्घरोगी हुनुहुन्न र चुरोट खानुहुन्न भने कोभिड–१९ कारण सामान्य खालको रुघाखोकी, शरीर दुख्ने भएमा पनि चाँडै निको हुन्छ ।कोभिड–१९ भएर सामान्य खालको लक्षण देखिएर सावधानी नअपनाएको खण्डमा घरमा भएका दीर्घरोगी र समुदायमा अन्य मानिसमा संक्रमण सरेर उनीहरुलाई सिकिस्त बनाउन पनि सक्छ । कोरोना पोेजेटिभ देखिएकाहरूले आफुलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन । घरपरिवार र समाजलाई जोगाउने जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हुन्छ । लक्षणविहीन संक्रमितबाट अन्यमा मानिसलाई कोरोना सर्ने भएकाले मौसमी फ्लूको लक्षण अनि कोरोनाको लक्षण देखिने बित्तिकै पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ । पिसिआर परीक्षण शुल्क महँगो भएका कारण पनि आशंका लागेका मानिसले परीक्षण गर्न सकेका छैनन् । दुई हजार शुल्क तिरेर सबैले कोरोना परीक्षण गराउन सक्दैनन् ।आशंका लागेका व्यक्तिले परीक्षण गर्न चाहेमा सरकारले परीक्षणका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ । कोभिड–१९ भएको आशंका लागेर परीक्षण गर्न सम्भव नहुनेहरू घरमै आइसोलेशनमा बस्नुपर्छ । सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई कोरोना पोजेटिभ भएपनि अनिवार्य रुपमा परीक्षण गराएर आइसोलेशनमा बस्नुपर्छ ।